नेपाल—भारत सिमालाई छाडा छोड्नुहुन्नः डा. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ - Namaste Post
नमस्ते पोस्ट २०७३, २७ भाद्र सोमबार ११:११ 0
नेपाल भारत सम्बन्ध असामान्य प्रकृतिको छ । सामान्य तवरले यसलाई ब्याख्या गर्न सकिँदैन । नेपाल भारत सम्बन्धलाई सामान्य रुपमा बुझ्न कठिन छ । सहजताका लागि यसलाई तीनवटा कोणबाट बुझ्न जरुरी छ ।
१. ऐतिहासिक सम्बन्ध
सन् १८१६ मार्च ४ अगाडि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो । सुगौली सन्धि पश्चात मेचिपूर्व टिष्टासम्मको भु—भाग, महाकालीदेखि पश्चिम काँगडासम्मको भु—भाग, चुरेभन्दा दक्षिणी श्रृङ्खला अन्तर्गत गण्डक र गंगाको संगममा बसोबास गर्ने नेपाली जनता भारतीय नागरिक भए । तर आठ महिनापछि नै राप्तीदेखि कोसीसम्मका जनता पुनः नेपाली नागरिक बन्न पुगे ।
अर्को तिर सुगौली सन्धिको ४४ वर्षपछि जङ्गबहादुर राणाले नयाँ मुलुक फिर्ता लिए । हाल कायम रहेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका जनता पुनः नेपाली नागरिकमा परिणत भए । म एउटा उदाहरण पेश गर्छु— बाँके जिल्लाको हिमिनिया गा.वि.स का ८० बर्षीय भत्तेआलम अन्सारी नेपाली नागरिक छन् । र उनका सहोदर भाइ कपुरी आलम अन्सारी भारतीय नागरिक बन्न पुगेका छन् सिमानाका कारणले गर्दा ।
त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपाली र भारतीय जनताको सम्बन्ध रगतको सम्बन्ध पनि हो । कसैको भाइ भारतीय र दाइ नेपाली पनि छन्, कसैका बाबु भारतीय छोरा नेपाली पनि छन् । यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध कति गहिराइमा छ भनेर ।
२. बहुआयामीक सम्बन्ध
भारतको ‘वे अफ बंगाल’ र ‘अरबियन सि’ बाट मनसुन हावाले पानी बोकेर आउँछ र नेपालको हिमालमा ठोक्किए पछि नेपाल र भारतमा बर्षा हुन्छ । नेपालमा परेको बर्षा र हाम्रो नदि नालाको पानी भारतमा जान्छ । नेपालमा ६० वटा सिमा नदिहरु भारततर्फ जान्छन् । नेपालमा हामीले नदिमा एक गाग्रो पानी खन्याए पनि त्यो भारतमै जान्छ । अन्यत्र जाँदैन । पानीको सदुपयोग गर्नुपर्ने सम्बन्ध पनि छ नेपाल र भारतको बीचमा ।
अर्को कुरा बाढी प्रकोप र डुबानको सम्बन्ध पनि रहेको छ । सिमा नदीमा सिमानामा नै बाँध बनाइयो भने भारतमा हुने सम्भावित बाढीको प्रकोप टर्छ तर त्यहि कारणले नेपाली भु—भाग डुबानमा पर्छ । एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्छु— २०६५ सालमा कोसी बाँधमा रहेका ५६ ढोका मध्ये २७ वटा मात्रै खुल्ला गरेपछि भारतमा बाढीको प्रकोप नियन्त्रण भयो । तर नेपालमा कोसी नदिले २७ कि.मी. तटबन्ध तोडेर सुनसरी डुबानमा प¥यो । दुई सय परिवार विस्थापित भए । केहि समय अगाडि मात्रै सप्तरीको तिलाठीमा भारतीय पक्षले तटवन्ध वनायँन खोज्यो । उक्त क्षेत्रका जनताबीच असमझदारी बढ्दा दोहोरो झडप भयो ।
अर्को कुरा भनेको अपराध व्यवस्थापन हो । एकदेशमा अपराधिक कृयाकलापमा संलग्नहरु घटना घटाएर सिमा काटी अर्को देशमा जानलाई सहज छ । त्यस्तै नेपाल भारत सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको रोजगारीको सम्बन्ध पनि हो । ६० लाख नेपालीहरु भारतका विभिन्न ठाउँमा श्रम गर्छन् । ५० लाख भारतीयहरु नेपालमा श्रम गर्छन् । त्यसैले दुई देशबिचको सम्बन्धमा रोजगारीले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
३. संवेदनशील सम्बन्ध
एउटा सानो असमझदारी हुँदा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा दरार पैदा भएका प्रसस्त उदाहरण छन् । नेपालले संविधान जारी गर्ने सवालमा केहि समय ढिला चाँडो भन्ने विषयमा विवाद हुँदा नेपालले चार महिनासम्म अमानवीय नाकाबन्दी बेहोर्नुप¥यो । २०१९ सालमा नेपाल र चीनको विषयमा कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय भयो । भारतीय मिडीयाले लेखे— नेपालमा कम्युनिष्ट बढ्ने भए भनेर ।
तत्कालिन राजा महेन्द्रले जवाफ दिए— कम्युनिष्टहरु गाडी चढेर आउँदैनन् । त्यहि कारणले गर्दा २०१९ बैशाखदेखि असोजसम्म नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरियो । नेपालको उत्तरी नाकामा रहेका भारतीय चेकपोष्ट २०२७ साल असारमा नेपाल सरकारले हटायो । त्यहि कारणले २०२७ कात्तिकदेखि २०२८ भदौसम्म पनि एक किसिमको नाकाबन्दी नै रहिरह्यो नेपालमाथि ।
राजा विरेन्द्र र राजिव गान्धीको बीचमा प्रोटोकलको विषयमा विवाद हुँदा पुनः नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइयो । २०४५ साल चैत दखि २०४७ असारसम्म नाकाबन्दी लगाइयो । सोनिया गान्धीले पशुपतिको दर्शन गर्न नपाउँदा पनि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो ।
छोटो समयमा नै दुई देश बीचको सम्बन्धमा निकटतासमेत ह्वात्त बढेको पाइन्छ । २०७१ साल साउन १९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेर संविधानसभामा सम्वोधन गर्दा नेपाल भारत निकटताको ग्राफ एकदम माथि पुगेको थियो । तर मोदीले जानकी मन्दिर, लुम्बिनी भ्रमण गर्न नपाएको लगायत संविधान संशोधन नगरिएका कारणले चार महिनाभन्दा बढि समय नेपालमाथि नाकाबन्दी गरियो ।
हाल नेपाल भारत सम्बन्धको ग्राफ उतारचढावपूर्ण छ । तर यो ”constant upward train” मा जानुपर्छ । त्यो कसरी सम्भव छ भने दुवै देश समानताको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा महसुस हुन पाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग दुवै देशलाई फाइदा हुने गरि पारस्परिकताको आधारमा उपयोग गरिनुपर्छ त्यो पनि दुवै देशले एक अर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरेर । दुई देशको सम्बन्ध एक अर्काप्रति सहयोगपूर्ण, समन्वयपूर्ण, संयमपूर्ण र सहिष्णु हुनुपर्छ ।
खुला सिमानालाई अब छाडा छोड्नुहुन्न । यो विषयलाई आसन्न भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा उठाउनुपर्छ । आतंकवादीहरु एकातिर अपराध गरेर अर्कोतर्फ भाग्ने गरेका छन् । यस प्रकारले हुने गरेको खुला सिमानाको दुरुपयोगलाई रोक्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यो दुवै देशको हितमा छ ।
सिमाना सम्बन्धि सुचना दुवै देशले एक अर्कालाई आदानप्रदान गर्नुपर्छ । सिमाना वारपार गर्नका लागि परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यस प्रकारको सावधानीले अपराध नियन्त्रण गर्छ । भारतमा बाढीको समस्या र नेपालमा डुबानको समस्या नआउने किसिमका उपाय अपनाउनु पर्छ । सिंचाइ दुवैतिर हुनेगरी जलश्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ ।
(२०७३ भदौ २५ गते काठमाडौंमा नेपाल इन्स्टीच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेशनद्वारा आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा श्रेष्ठद्वारा व्यक्त विचार)